सुर्खेतमा ‘स्मार्ट लकडाउन’यी नियमको पालना नगरे कारबाही गरिने
सुर्खेतमा शनिबार राती १२ बजेदेखि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिएको छ । सुर्खेत प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै सो कुराको जानकारी गराएको हो ।
आदेशअनुसार २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा तथा सेवा लिँदा माघ ७ देखि खोप कार्ड देखाउनुपर्ने समेत भनिएको छ । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार खोप कार्ड मोबाइलमा फोटो भएपनि मान्य हुनेछ भने आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरे प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक सवारीको सन्दर्भमा स्वीकृत सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने भएको छ भने सबै यात्रुहरुले मास्क लगाउने, सवारी साधनको ढोकामा स्यानिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउने र अनिवार्य रुपमा सवारी साधन दैनिक स्यानिटाइजर गर्नुपर्नेछ ।
कोरोना कालको अबस्थामा औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपुर्तिमा कृतिम अभाव सृजना गर्ने, मुल्य वृद्धि गर्ने, लुकाउने, सहज आपूर्तिमा अवरोध गरे कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिए । साथै प्रशासनले कोरोना भाइरस सम्बन्धी आदेशको पालना सम्बन्धमा सुरक्षा निकायबाट नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीको सम्पत्ति : ५६ तोला सुन, ९५ लाखको कार र ठाउँ–ठाउँमा जग्गा
कसरी भत्कियो ५ करोडको बेलिब्रिज,जडान नहुँदै ?
किन गरियो कर्णालीका स्थानीय तहमा गरिएका बढुवा खारेज ? यस्तो छ कारण
कोरोना अपडेट : यस्तो छ कर्णाली प्रदेशको तयारी
कर्णाली प्रदेशले माग्यो १५० चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै सकेनन्,खेपे आलोचना